အလှအပရေးရာ Archives - CeleLove
ညိုမည်းနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးကို ပြန်ပြီး ပန်းရောင်သမ်းလာအောင် လုပ်ပေးမယ့် နည်းလမ်း (၃)မျိုး
ညိုမည်းနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးကို ပြန်ပြီး ပန်းရောင်သမ်းလာအောင် လုပ်ပေးမယ့် နည်းလမ်း (၃)မျိုး အခုနောက်ပိုင်းမှာ နှုတ်ခမ်းနီတွေက တံဆိပ်မျိုးစုံ၊ ပုံစံမျိုးစုံ၊ အရောင်အသွေးမျိုးစုံနဲ့ ထွက်လာတော့ ရွေးချယ်စရာတွေကလည်းများလာတယ်။ နှုတ်ခမ်းနီလှလှလေးဆိုးလိုက်ရင် နှုတ်ခမ်းလှလှလေးကို ချက်ချင်းရနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် နှုတ်ခမ်းနီအမြဲဆိုးပေမယ့် နှုတ်ခမ်းကို ဂရုစိုက်ဖို့တော့ မေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ကြာလာတဲ့အခါ နှုတ်ခမ်းညိုမည်းတာတွေဖြစ်လာပြီး […]
အသက်ကြီးတဲ့အထိ အသားအရေကောင်းခြင်းဆိုတာကို ပိုင်ဆိုင်စေမယ့် လျှို့ဝှက်ချက် (၅)ချက်
September 11, 2019 Cele Love 0
အသက်ကြီးတဲ့အထိ အသားအရေကောင်းခြင်းဆိုတာကို ပိုင်ဆိုင်စေမယ့် လျှို့ဝှက်ချက် (၅)ချက် အသားအရေရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုတာ ဝက်ခြံ၊ တင်းတိပ်၊ အမည်းစက် စတဲ့ အပြစ်အနာအဆာတွေ ကင်းဝေးပြီး အဆီပြန်စေးကပ်နေတာတွေ မရှိဘူး၊ အရေးအကြောင်းတွေ မရှိဘူး၊ အသားအရောင်မညီညာဘဲ ညစ်ထေးနေတာမျိုးမရှိဘူး၊ ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် ရေချိုးပြီးစလို ကြည်သန့်နေတာမျိုး၊ ကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ အသားအရေလို နူးညံ့နေတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး […]
မည်းနေတဲ့ ဒူးခေါင်းတွေ တံတောင်ဆစ်တွေကို ဖြူဝင်းလာစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း (၆)မျိုး
မည်းနေတဲ့ ဒူးခေါင်းတွေ တံတောင်ဆစ်တွေကို ဖြူဝင်းလာစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း (၆)မျိုး ဒူးခေါင်းတွေ တံတောင်ဆစ်တွေ မဲနေလို့ စိတ်ညစ်နေလား? ဒူးခေါင်းမဲတာတွေ တံတောင်ဆစ်မဲတာတွေကြောင့် ပျိုမေတေို့ လက်ပြတ်အကျီင်္ိ၊ ဘောင်းဘီတို၊ စကပ်တိုဝတ်တဲ့နေရာတွေမှာ ယုံကြည်ချက်တွေပျောက်ဆုံးနေတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုမဲနေရတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေကတော့ ဆဲသေတေါစုပုံနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒူးခေါင်းမဲတံတောင်မဲတာတွေကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ အိမ်တွင်းနည်းလမ်း (၆)မျိုးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် […]
ဦးရေပြားအဆီပြန်ခြင်းကြောင့် ဆံပင်စေးကပ်လွယ်တာကို ပြုပြင်ပေးမယ့် သဘာဝနည်း (၄)နည်း
ဦးရေပြားအဆီပြန်ခြင်းကြောင့် ဆံပင်စေးကပ်လွယ်တာကို ပြုပြင်ပေးမယ့် သဘာဝနည်း (၄)နည်း ဆံပင်အဆီပြန်ခြင်းက အလှကြိုက်တဲ့ ပျိုမေတို့အတွက် အလွန်အမင်းစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဦးရေပြားအဆီပြန်တတ်ရင် ခေါင်းလျှော်ပြီးလို့ လှလှလေးပုံသွင်းထားတာကလည်း တစ်ရက်ပဲခံပြီး နောက်နေ့ရောက်တာနဲ့ ပြားကပ်သွားတာမျိုးပါ။ ပြီးတော့ နောက်ထပ်ပုံသွင်းလို့လည်း အဆင်မပြေပါဘူး။ ဒီလိုမဖြစ်ချင်ရင်တော့ ဦးရေပြားအဆီမပြန်အောင် လုပ်မှပဲရမှာပါ။ ဒါကြောင့် ဦးရေပြားအဆီပြန်တာကို ထိထိရောက်ရောက် […]
အရောင်မညီညာဘဲ ညစ်ထေးထေးဖြစ်နေတဲ့ အသားအရေကို ကြည်သန့်သွားစေမယ့် နည်း(၄)မျိုး ပျိုမေတို့မျက်နှာအသားအရောင် မညီမညာဖြစ်နေတာ၊ မိတ်ကပ်ပုံမှန်ဖျက်ပေမယ်၊ မျက်နှာသစ်ဆေးကောင်းကောင်းသုံးပေမယ့်၊ မျက်နှာပေါ်က အညစ်အကြေးတွေကောင်းကောင်းမသန့်စင်ဘူးလို့ခံစားရတယ်၊ skin care ပုံမှန်လုပ်ပေမယ့် အသားအရေက ကြည်လင်မှုမရှိဘူး၊ အသားအရောင် မညီညာဘူးဆိုရင် အခုဖော်ပြမယ့် ကြေးချွတ်ပေါင်းတင်နည်းလေးတွေကို အိမ်မှာတင် လုပ်ကြည့်လိုက်နော် …. (၁) နနွင်းမှုန့်ပေါင်းတင်နည်း […]
ဆံသားကောင်းစေပြီး ဆံပင်မြန်မြန်ရှည်လာစေမယ့် သဘာဝပေါင်းတင်နည်း (၄)မျိုး
August 25, 2019 Cele Love 0
ဆံသားကောင်းစေပြီး ဆံပင်မြန်မြန်ရှည်လာစေမယ့် သဘာဝပေါင်းတင်နည်း (၄)မျိုး ပျိုမေတို့ဆံကေသာလေးတွေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကျိုးကြေနေတယ်၊ ခြောက်သွေ့နေတယ်၊ အချိန်ကြာတဲ့အထိမရှည်လာဘဲ အားနည်းနေတယ်ဆိုရင် ပြန်ပြီးသန်စွမ်းလာအောင်၊ အချိန်တိုအတွင်းရှည်လာအောင်၊ အစိုဓာတ်ပြည့်ဝပြီး ပြန်တောက်ပလာအောင် ဒီနည်းလေးတွေ ပြုလုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်နော် …… (၁) ကြက်ဥ၊ မရောနိစ် ကြက်ဥတစ်လုံး၊ မရောနိစ်(၆)ဇွန်း၊ ပျားရည်တစ်ဇွန်းတို့ကို ရောမွှေပါ။ […]
မျက်နှာပေါ်က ချွေးပေါက်ကျယ်တွေကို လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားစေမယ့် ပေါင်းတင်နည်းများ
မျက်နှာပေါ်က ချွေးပေါက်ကျယ်တွေကို လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားစေမယ့် ပေါင်းတင်နည်းများ မျက်နှာမှာ အဆီပြန်တတ်ကြတဲ့သူတော်တော်များများ ချွေးပေါက်ကျယ်တတ်ကြတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်မျက်နှာ ချွေးပေါက် အရမ်းကျယ်နေရင် အဆီပြန်တတ်လို့ မိတ်ကပ်လိမ်းရင်တောင် အဆင်မပြေကြဘူး။ အဲ့လို ချွေးပေါက်ကျယ်လို့ စိတ်ညစ်နေကြတဲ့ ပျိုမေတို့အတွက် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် နော် ….. (1) ရေခဲ ရေခဲကိုသုံးပေးတာက အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းပဲဖြစ်တယ်။ […]
စက်ဆွဲစရာမလိုဘဲ ဆံပင် ပျော့အောင် သဘာဝ ပေါင်းတင်နည်း ဆံပင် တစ်ခါမှ မဖြောင့်ဖူးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဆံပင်က ဖြောင့်ထားတဲ့ သူတွေလို ပျော့တယ် ဆံသားပြောင်တယ် စင်းတယ် …။ ဘာမှမလုပ်မှတော့ ဘယ်ပျက်ဆီးမလဲ လို့တော့မထင်နဲ့ ဆံပင် ဆေးဆိုးတာတော့ ရက်ရက်စက်စက် ဆိုးတယ် အရောင်မကြိုက်ရင် တစ်လတည်းကို […]
အမည်းစက်တွေ ပျောက်ဖို့ အာမခံတဲ့ အလွယ်ကူဆုံး သဘာဝနည်းလမ်းများ
အမည်းစက်တွေ ပျောက်ဖို့ အာမခံတဲ့ အလွယ်ကူဆုံး သဘာဝနည်းလမ်းများ အမည်းစက်တွေက မျက်နှာပေါ် ၊ ပခုံးပေါ် ၊ လက်မောင်း နဲ့ကျော်ဘက်တွေမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပါတယ်။ အမည်းစက်တွေက နေရောင် ၊ ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲ ၊ မျက်နှာအမွှေးတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်း ၊ ၀က်ခြံအမာရွတ်ကနေ ၊ အသက်အရွယ် စတာတွေကြောင့် ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ […]